उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन `पासाङ´का कुनै समयका अंगरक्षक हितमानको साउदी अरवबाट पत्र : सम्झना मनैभरि छ है ‘पासाङ’ कामरेड ! « Etajakhabar
उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन `पासाङ´का कुनै समयका अंगरक्षक हितमानको साउदी अरवबाट पत्र : सम्झना मनैभरि छ है ‘पासाङ’ कामरेड !
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७६, आईतवार १२:५९
काठमाडौं । अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङका अंगरक्षकका रुपमा काम गरेका हितमान बुढा यतिवेला साउदी अरबमा छन् । गरिबका सुनौलो दिन ल्याउन भन्दै बुढा जस्ता युवालाई बन्दुक बोकाएका नन्दकिशोर अहिले उपराष्ट्रपति बने तर सुनौलो भविष्यको सपना बोक्दै बन्दुक बोकेका उनका अंगरक्षक भने यतिवेला साउदीको तातो बालुवामा काम गर्दैछन् । नेपालमा भएको राजनीतिक गतिविधिले उनको मन कति पोल्दो हो । आफ्नो जवानी खर्चेर अरुलाई कुर्चिमा पुर्याएका बुढाको जिवन जस्ताको तस्तै छ उनको काँधमा चढेर कुर्चीमा पुगेकाहरुको जिवनी परिवर्तन भएको छ ।
कुनै बेला एउटै थालमा खाना खाएका पासाङलाई ति जनयुद्धका दिन पक्कै याद आए होलान् । त्यसैले उनले एक दिन आफ्नो फेसवुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन् । डोल्पा सदरमुकाम दुनै आक्रमणको तयारीको भुगोल निरिक्षणको लागि जाने क्रममा मैकोटको बुकि पुपाल भञ्ज्याङमा खिचिएको तस्विर सहित उनले निकै भावुक स्टाटस लेखे । तस्बिरमा देख्न सकिन्छ अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पासाङ), कालिबहादुर खाम (बिबिध), जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), बर्षमान पुन (अनन्त) र उनै पासाङका अंगरक्षक हितमान बुढा छन् ।
नेपालमै आफ्ना दिन पनि सुनौला होलान भन्दै बन्दुक बोकेर खोला र पहाड चढेको अनि कति दिन भोकै बसेका बुढाको सपना सबै भताभुंग भएको छ । त्यसैले उनले साउदीमा बसेर अहिले पनि ति दिन सम्झन्छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै :
`उहाँ उही पासाङ हुन् ५२ का कमाण्डर । म उनकै अंगरक्षक हुँ, सहयोद्धा पनि थिएँ । आज उनि आसिन महलमा छन् । अंगरक्षक भने रोडमा घुमिरहेको छ । तर मैले नभुझेको कुरा उनी बदलिएका हुन् कि समयले बदलिदिएको हो ? उनी सुरक्षा घेरामा छन् ? वा नजर बन्दमा ? जसले उनको ज्या न बचाइ दियो, उनीहरु नै बाहिरिएका छन्, जसले उनलाइ मा र्न खोज्दथ्यो, उनिहरु नै अंगरक्षक बनेका छन् । उहाँ र हाम्रो भेटघाट हुनलाई अर्कै मान्छेको माध्यम चाहिन्छ । समय अबधि टोकिन्छ, उनै बैरिहरुले चेक जाँच गर्छन् र पासकार्ड दिन्छन्, गेटमा साब र एस सर भन्न्नु नै पर्ने हुन्छ । चाहेर पनि भेटघाट गर्न सक्दैनौ । हजारौं जनमुक्ती सेनाहरु, अंगरक्षकहरु गेटसम्म आउछौँ र हजुर बस्नु भएको आलिशान महल तिर हेरर फर्किन्छौं । पुरानो हुदैन माया, बिगतले भटभटी पोल्दो रहेछ । सम्झना मनै भरी छ है कमरेड ।´
पासाङका साथमा अंगरक्षक हितमान बुढा
अन्तिममा आफ्नो यादगरहरु दर्शाएर लेखे, सम्झना मनैभरी छ कमरेड ! त्यही बर्गिय नाताको सम्झना थियो सायद । जहाँ मकैको एक मुट्ठी खाजा पाए भने आधा आफू खाएर आधा आफ्नो अंगरक्षको लागि छुट्याइदिन्थे । कति ममतामय सम्बन्ध थियो है ती दिनहरुमा ? त्यो बाहेक पछिल्लो समयका सम्झनाहरु खासै सम्झना लायकका के थिए र ? अपमानित र तिरस्कृत न हो ।
हिजो पासाङको मुठ्ठी खाजाका हिस्सेदार थिए । तर आज हितमानले नन्दकिशोरको आधा गद्दीको हिस्सेदारी हुन पाउनुपर्छ भनेर चिच्याउनु भएन । केवल उसलाई देश छाडेका चालीस लाख युवाहरुलाई फर्काउन राज्यले पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने झिनो अपेक्षा छ ।
समय बदलिएको हो वा समयले मान्छेलाई बदलेको हो भन्ने दुबिधामा हुनुहुन्छ । हिजोका ती प्यारा कमान्डरहरु आज कसरी आफुहरुलाई नचिन्ने भए ? कि आफू बूढो भएको हो ? कि नेतृत्वको आँखा कमजोरी भएको हो ? हुन त समय कहिलै स्थिर हुँदैन । सायद समयले उनिहरुलाई बदल्यो । त्यसपछि समयसंगै कमान्डरहरुले आफ्नो बर्ग पनि बदले ।
डोल्पा सदरमुकाम दुनै आ’क्रमणको तयारीको भुगोल निरिक्षणको लागि जाने क्रममा मैकोटको बुकि पुपाल भञ्ज्याङमा खिचिएको तस्विर
बर्ग बदलेपछी स्वभाविक रुपमा बर्गको चरित्र पनि बदलिन्छ । तब बदलिएको नयाँ चरित्र परम्परागत माथिल्लो बर्ग भनिएकाहरुको चरित्र भन्दा खतरनाक साबित हुँदोरहेछ । चरित्र बदलिएपछी सायद हामी शत्रु भयौं । हिजोका शत्रुहरु सहायक बने । यहि कारण अहिले भेटघाट गर्नलाई हामीलाई पास काटिन्छ र समय सिमा तोकिन्छ ।
समय बदलिएछ कमरेड । समयले तिम्रो अबस्था बदल्यो । हाम्रो अबस्था बदल्यो । बदल्न त दुबैको अबस्था बदलिएको छ । तिमी उकालो चढ्यौ । हामी ओरालो झरिरहेका छौँ । तिमी आकाशमा पुग्यौ, हामी धर्तिमै भासिदै छौँ । मरुभुमिमा भासिदै छौँ । कमरेड के समय बदलिएकै हो ? कहाँ गए ती आस्थाहरु ? याद छ कमरेड ? मलाई अझै बिश्वास लागिरहेको छैन ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ सरकारले जारिगरेको यो सूचना पढ्नुहोस र मात्र घरबाहिर निस्कनुहोला
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:०१ | Taja Khabar
साउन १८ गतेदेखि लागू हुदै छ काठमाण्डौमा यस्तो नियम
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:३६ | Taja Khabar
कोरोनाको जोखिम बढेपछि साउन १८ गते देखि फेरी काठमाण्डौमा लागु हुने भयो यस्तो नियम (बिज्ञप्तिसहित)
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १८:१५ | Taja Khabar
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:४९ | ताजा खबर
२३ असार २०७७, मंगलवार १३:१६ | Taja Khabar
कोरोनाभाइरस महामारीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले फेरि कडिकडाउ गर्ने
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका सङ्ख्या फेरि बढ्न थालेपछि सरकारले पुन: कडिकडाउ गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधवार साँझ
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण २२ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल श्रावण २२ गते बिहिबार इश्वी सन २०२० अगस्त ६
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो भोलि देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा लागु हुने नयाँ नियम, अब के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ?
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चाल हुने निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा पुनः जोर बिजोर प्रणाली
सवारीसाधन देखि सर्वसाधारणलाइ भोलि देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा लागु भयो नयाँ नियम, अब के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइदैन ?
काठमाण्डौ – बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै मुलुकभर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले भोलि (बिहीबार) देखि
२१ श्रावण २०७७, बुधबार २१:२३
कोरोनाको जोखिम बढेपछि १४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १७:५०
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्याले तोड्यो रेकर्ड, खतरा बढ्दै
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १६:४६
कोरोनाको महामारी, सरकारले लगायो यि १४ जिल्लामा कफ्र्यु (सूची हेर्नुस्)
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १५:३७